Plastic ebu injection ịkpụzi kwekọọ na-emekarị nke mmepe n'ọdịnihu - Aojie akpụzi Co., Ltd.
Mon - Sat na 7:00 AM ruo 9:00 AM
Intlọ ọrụ Intro
Gịnị ka anyị ga-eme?
Auto Parts akpụzi
Industrial Products akpụzi
Ezinaụlọ Ngwaahịa akpụzi
Motorcycle & skuuta akpụzi
Onodi & akụrụngwa
Akpụzi Usoro Flow
Ebu Nyocha Nnyocha Ebu
Plastic ebu injection ịkpụzi kwekọọ na-emekarị nke mmepe n'ọdịnihu
Ugbu a, omume nke ọha mmadụ, mmepe nke ebu dị ngwa ngwa. Ndị mmadụ na-ahụkarị ọgwụ ịkpụzi plastik. N'okpuru atụmanya ahịa, enwere ike ịtụ anya ọdịnihu. Shandong Zheng's Plastic Mould Factory kwekọrọ na mmepe nke oge, na teknụzụ ya na-emewanye ngwa ngwa.
The ugbu ọnọdụ nke mmepe nke ọgwụ akpụzi ugbu a ọnọdụ nke ngwaahịa Ọdịdị China si plastic ebu ụlọ ọrụ enwetela ihe karịrị ọkara narị afọ, ma nwee ọganihu dị ukwuu. Na nnukwu ebu, anyị mepụtara 48 Inch nnukwu ihuenyo agba plastic shei injection ebu, 6.5kg nnukwu ikike saa igwe, zuru ezu plastic ebu, nakwa dị ka ụgbọ ala bompa na integral dashboard plastic ebu. N'ihe banyere nkedo nkenke plastik, anyị enweela ike ịmepụta akụkụ plastik na ebu maka igwefoto. Oghere obere modulu gia ebu na plastik ebu.
Ka ọ dị ugbu a, eji nwayọọ nwayọọ eme ka ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ wee nwee ihe karịrị 20% na ụlọ ọrụ ụfọdụ. Ha na-ejikarị ọkụ ọkụ dị n'ime ma ọ bụ akụrụngwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na mpụga, yana ọkwa dị elu nke ụwa nke ihe siri ike agịga valvụ na-agba ọsọ ọsọ. Advancedwa dị elu nke agịga valvụ ọkụ na-agba ọsọ. Otú ọ dị, ọnụego nkuchi nke onye na-agba ọsọ ọkụ bụ ihe na-erughị 10%, nke dị nnọọ iche na nke 50% na 80% ná mba ọzọ.
Ngwa nke CAD / CAE / CAM na ngwangwa mmepe nke ụlọ ọrụ ọkụ na nrụpụta ụgbọala, na-akpụzi ihe eji ebu ebu ebe niile, ma kpụọ ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, China si ebu ụlọ ọrụ bụ enweghị oru pesonel, dịgasị iche iche, ala nkenke, obere n'ichepụta okirikiri, obere ndụ, obere ọkọnọ. Fọdụ ebu, mgbagwoju ma sie ike ebu enweghi ike imepụta onwe ha. Ọ na-ewe ọtụtụ nde na nde iri nde dollar mbubata site na mba ọzọ kwa afọ, nke na-egbochi mmepe nke ụlọ ọrụ ebu. Ya mere, ọ dị oke mkpa ịzụlite ụlọ ọrụ ebu. Iji melite imewe larịị na nhazi ike nke ebu ụlọ ọrụ. The CAD / CAE / CAM usoro na-atụ aro site na China Die & ebu mkpakọrịta adabara maka Die & akpụzi Company na mba anwụ & ebu ụlọ ọrụ.
Usoro CAD / CAE / CAM maka ịkpụzi ebu na ịkpụzi anaghị achọ nnukwu usoro, mana ọ chọrọ nnukwu ihe achọrọ n'akụkụ ụfọdụ, dịka ịme ngosipụta ihu igwe na igwe CNC atọ. Agbanyeghi na sistemụ CAD / CAE / CAM nke mba ofesi nwere ọrụ dị ike nke imepụta ihe ngosi 3D, nhazi usoro mmechi, nhazi kọmputa na njikwa data ngwaahịa, ha dị oke ọnụ ma sie ike ịnagide ụlọ ọrụ izugbe.
Plastic ebu ọgwụ nhazi ojii na-ebute ụzọ nke mmepe nke oge, na mmepe na-emekarị nke ifufe, ga-eme n'ọdịnihu na-atụ anya.
Aojie akpụzi Co., Ltd.